Cheesy Hamburger Dip - Fomba Fanamboarana
ohatrinona ny spiral ham no ilaiko
scallops bacon misy saosy dibera tongolo gasy
mifangaro biskoitra an-trano ao anaty siny
mampiasa epinara vaovao fa tsy mangatsiaka
Cheesy Hamburger Dip dia dipozy kesika manankarena miaraka amin'ny tsiro burger tianao indrindra. Manosotra azy amin'ny fromazy cheddar maranitra kokoa aza, avy eo manendy mandra-pahafatiny sy hiboiboika. Aroso miaraka amin'ny sakafom-pisakafoanana tianao toa azy Fandroahana akoho buffalo ho an'ny fety tonga lafatra miparitaka!
Ity fanondranana hamburger ity dia nitondra fanampim-baovao ho an'ny antsika fomba fahandro lisitra dia tena cheesy, feno tsiro ary lasa adala daholo ny rehetra.
fromazy grits fromazy miaraka amin'ny grits haingana
Faly be aho fa niara-niasa tamin'ny Cabot Cheese hitondra anao ity fomba fahandro mafana ity.
Tiako ny burger be ranony… ary inona no tsara kokoa amin'ny burger noho ny ampongaben'ny fromazy cheddar? Raha mitady ny tsiro cheddar tsara indrindra ianao, dia maranitra no lalana tokony haleha! Ny fromazy cheddar melty tsara dia mazava ho azy fa ny fonosana burger tsara indrindra (miaraka amin'ny pickles mazava ho azy)!
Tahaka ny itiavako cheeseburger mamy amin'ny tsaramaso sesame, heveriko fa tiako kokoa ity Cheesy Hamburger Dip ity azo zahana kokoa! Izy io dia feno tsiro burger tsara indrindra, pickles, bacon ary mazava ho azy antontam Cheese Cheddar maranitra mafy manampy betsaka ny tsiro cheddar sahisahy.
Cabot dia mankalaza ny faha-100 taonan'izy ireo ho mpiara-miasa amin'ity taona ity ary inona no fomba tsara kokoa ankalazana fa tsy miaraka amin'ity lalao cheesy lalao anio ity! Ny Cabot Cheese dia fananan'ny fianakaviana tantsaha miisa 1.000 manerana an'i New England sy New York ary ny vola miditra rehetra dia ampidirina ao anaty rano miverina mivantana amin'ireo tantsaha . ❤️
fomba fahandro elatra akoho misy saosy soja
Cheesy Hamburger Dip azo namboarina mialoha ho an'ny potluck na fety ary samy tia ny tsiro amin'ity milomano ity ny tsirairay! Omeko an'ity mandroboka cheeseburger ity amin'ny maraina (na ny alina talohan'izay) ary apetaho amin'ny lafaoro rehefa tonga ny vahiniko. Amin'ny antsasak'adiny dia hanana dipozy cheesy mafana ianao izay vonona hohanina. Aroso miaraka amina crackers sesed cheddar (na chips tortilla)!
Mba hanaovana Cackdar Sesame Crackers: esory tsotra izao ny boribory (na endrika) avy amin'ny tortillas, borosy dibera ary hafafaho amin'ny fanompoana malala-tanana avy amin'i Serious Sharp Cheddar ary endaso mandra-pahazavana na mangatsiaka. Azo atao 3 andro mialoha ny fotoana izany!
Ahoana ny fanamboarana ny hamburger
Misy zavatra vitsivitsy tsara kokoa noho ny milentika fromazy tsara, ao anatin'izany ny dipozy cheeseburger be ranony! Ny tsiambaratelo amin'ny fanosotra fromazy azo avy amin'ny crème dia ny fampiasana mixeur-tanana hampifangaro ny fotony. Manampy ny rivotra ao anaty fromazy fanosotra izy, mahasalama sy mora esorina! Nampidiriko tamin'ny tsiro burger tiako indrindra amin'ity fomba fahandro ity, raha manana sombin-tsakafo tianao ianao dia ampidiro… tongolo voatavo, voantsinapy mavo, tsaramaso, zava-manitra steak dia tsara ao amin'ity recette ity!
Mba hanaovana ity Cheesy Hamburger Dip ity:
Atambatra ny fromaoma misy ny sakamalao Cabot sy ny mix-in
Atsofohy Cheese Cheddar maranitra mafy
Top miaraka amin'ny fromazy sy bacon bebe kokoa
Mofomamy mandra-pahatonga ny hafanana sy ny bontolo ary ny fromazy ho levona
Salady, pickles ary voatabia voatetika no voatabia tsara ho an'ity fihinana hamburger ity. Raha mpankafy ianao Jalapeno Popper Dip , ampio jalapenos diced vitsivitsy amin'ny mix!
Azonao atao ve ny mangatsiaka menaka fanosotra amin'ny crème
Eny, azonao antoka izany! Raha sendra misy ambiny ianao, ity milentika ity dia tonga lafatra mba hivaingana sy hitsitsiana tsakitsaky andro hafa! Tsara koa ny mamorona holatra fenoina (fenoy fotsiny ary atsofohy) na hiparitaka amin'ny toast aza!
Recipe Cheesy misimisy kokoa izay ho tianao
Ampiasao ny tianao Cabot Cheddars (izay tsy misy gluten voajanahary sy tsy misy lactose) ao anatin'ireny snacks cheesy ireny:
Nachos be entana indrindra
Hoditra Ovy Mono Lafaoro Kely
Holatra mora vonoina
Fotoana fanomananaroa-polo amby minitra Fotoana fandrahoan-tsakaforoa-polo amby minitra Fotoana manontolo40 minitra Fanompoana12 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity fanondranana hamburger ity dia misy famenon-dronono feno ny tsiro burger tianao indrindra. Ampiofanina miaraka amin'ny fromazy bebe kokoa aza, avy eo endasina mandra-pahatongan'ny hafanana sy fikotrokotroka. pirinty Pin
▢1 tongolo diced tsara
▢8 ounces Cheese crème cabot nihanalefaka
▢½ kapoaka krema marikivy
▢rOA tablespoons ketchup na saosy barbecue
▢1 sotro Saosy Worcestershire
▢½ sotrokely paprika nifoka
▢1 sotro Dijon mustard
▢3 tablespoons ranona pickles dill
▢rOA kaopy Kobazy Cheddar maranitra mafy nizara roa toko
▢8 silaka Bacon endasina crisp ary voatetika
Hen'omby henjana, tongolo ary tongolo gasy amin'ny hafanana antonony mandra-pahatongan'ny sisa tsy mavokely. Arotsaho izay tavy rehetra.
Amboary ny fromazy fanosotra, crème marik, ketchup, saosy Worcestershire, paprika setroka, ranom-boankazo dill ary voan-tsinapy Dijon miaraka amina mixeur-tanana mandra-pahatonga ny volony.
Aforeto ny henan'omby, kapoaka 1 ½ Cabot Cheese Cheddar Mahatsiravina ary antsasaky ny bacon.
Aparitaho ao anaty lovia pie 9 na lovia casserole. Top miaraka amin'ny fromazy sy bacon sisa. Manendasa 18-21 minitra na mandra-pitrongana sy mibontsina. Broil raha ilaina.
Tortillas lafarinina 6 - 10 '
1/3 kaopy dibera afangaro
1/2 kapoaka Cabot Matsiro Cheese Cheddar maranitra, voatetika
Maso sesame 3 sotro fihinanana
Afanaina hatramin'ny 350 ° F ny lafaoro.
Hetezo ny tortilla ho lasa wedges (na mampiasa cutter cookie hanapaka faribolana).
Atambatra ny menaka voatavo sy ny vovoka tongolo gasy. Atsipazo amin'ny tortillas mandra-pandoko azy ireo.
Mametraha tortillas ao anaty sosona iray (mety mila lapoaly 2 ianao) ary hafafaho amin'ny fromazy cheddar sy masomboly sesame.
Mofomamy 8-10 minitra na mandra-pahatongan'ny volamena.
Kaloria:311,Karbohidraty:3h,Proteinina:dimy ambin'ny foloh,Tavy:26h,Tavy mahavoky:12h,Cholesterol:80levitra,Sodium:414levitra,Potasioma:231levitra,Sugar:rOAh,Vitamina A:560IU,Vitamina C:1.2levitra,Kalsioma:175levitra,Vy:1.2levitra
ny fomba hitazomana ny salady voankazo ho madio mandritra ny alina
Teny lakilehamburger dip Mazava ho azyAppetizer, Dip masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Faly aho fa niara-niasa tamin'ny Cabot Cheese hitondra anao ity atody hamburger manafana ny kibo ity. Raha nahazo onitra tamin'ity lahatsoratra ity aho dia ahy ny eritreritra sy ny hevitra rehetra. Ny fiaraha-miasa amin'ireo marika tsara tiako dia mamela ahy hitondra anao hatrany ireo fomba fahandro tena tianao!